Gündoğan oo ka hadlay waddada kaliya ay kaga guuleysan karaan Liverpool horyaalka Premier League – Gool FM
(Manchester) 08 Okt 2019. Kooxda Manchester City ayaa guuldaro 2-0 ah kala kulantay dhigeeda Wolverhampton kulan ka tirsanaa kulamada 8-aad ee horyaalka Premier League.
Skay Blues ayaa soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u xun oo aan lagu daawananin tan iyo imaatinka tababare Pep Guardiola ee garoonka Etihad.
Haddaba guuldaradan soo gaartay Manchester City ayaa waxay ka dhigan tahay in 8 dhicbood nadiif ah ay ka hooseeyaan hogaamiyaasha horyaalka Premier League ee Liverpool, kaddib 8 kulan ilaa iyo haatan laga soo ciyaaray xilli ciyaareedkan.
Haddaba xiddiga khadka dhexe ee kooxda Manchester City iyo xulka Jarmalka İlkay Gündoğan ayaa qiray in howsha ku aadan in markii saddexaad ee xiriir ah ay difaacdaan horyaalka Premier League ay tahay arrin aad u adag, isla markaana ay ku xirnaan doonto kaliya in Liverpool ay dhibco iska lumiso kulamada soo socda.
Haddaba İlkay Gündoğan ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Haddii aan dooneynno inaan ka hadalno ku guuleysiga horyaalka Premier League markii saddexaad xiriir ah, taasi waxay la micno tahay inLiverpool ay dhibco lumiso”.